Adil Rami ” Hada Si Fudud ayaa loo Difaaci karaa Lionel Messi “ | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Adil Rami ” Hada Si Fudud ayaa loo Difaaci karaa Lionel Messi...
Adil Rami ” Hada Si Fudud ayaa loo Difaaci karaa Lionel Messi “
Daafaca kooxda Troyes Adil Rami ayaa sheegtay in ay ka sahlan tahay in laga difaaco Paris Saint-Germain Lionel Messi xiligan.
Labada nin ayaa si joogto ah iskaga soo horjeeday intii ay joogeen La Liga, halkaas oo Rami – oo hore u ahaan jiray Valencia iyo Sevilla – uu ka hor yimid Messi 12 jeer oo uusan marna ku dhicin kooxdii badisay.
Messi iyo Rami – 34 iyo 35 siday u kala horreeyaan – ayaa dib u soo cusbooneysiin doona cadaawadda xilli ciyaareedka Ligue 1, inkastoo, Rami uusan fileynin inuu wajaho dagaal adag oo ka dhan ah saaxiibkiis halyeeyga markan.
Isaga oo la hadlaya Website-ka rasmiga ah ee Ligue 1 , Rami ayaa yiri: “Xaqiiqdii, waligey ma guuleysan, laakiin waxaa jiray barbaro (3).
si kastaba ha ahaatee … Aad buu u xoog badnaa. Waqtigaas, mar walba gadaashayda ayuu taagnaa, halis badan ayuu lahaa.
“Waxay ahayd wax aan la rumaysan karin. Hadda wuxuu ka badan yahay doorka baasaska, sidaa darteed way u fududdahay difaacayaasha, waan filan karnaa taas.
PSG ayaa 2-1 kaga adkaatay Troyes horraantii xilli ciyaareedkii Ligue 1 ka hor inta uusan Rami ku soo biirin kooxda, labada kooxood ayaa kulmaya ilaa May 8-da.
Previous articleArsenal, iyo Leicester City oo hogaaminaya loolanka loogu jiro xiddiga Villarreal Yeremi Pino
Next articlePhilippe Coutinho oo wadahadalo kula jira Kooxda Newcastle United